Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Bahamas News Breaking » Maxaa ku cusub The Bahamas bishii Luulyo
Bahamas News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • kariska • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • jiga • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Xilliga Xagaaga ee Bahamas waa mid si xawli ah ku socda, hal-abuurnimaduna waxay kululaaneysaa guud ahaan 16-meelood oo jasiirado u gaar ah iyada oo siyaabo aad u fudud loogu safri karo dadka safraya si ay u yimaadaan oo ay sahamiyaan xeebta.
Marcus Samuelsson oo ah kuugga lixda jeer ku guuleystay abaalmarinta James Beard Marcus Samuelsson ayaa ka soo muuqan doona makhaayaddiisa cusub, Baha Mar Fish + Chop House, oo ku taal Baha Mar bisha Luulyo 12.
Jasiiradda Grand Bahama waxay soo bandhigaysaa Dive Grand Bahama.
Huteel abaalmarin ku guuleystay, dalxiis iyo jasiirad gaar loo leeyahay oo ku taal Nassau, Sandals Royal Bahamian Sandals Royal Bahamian, ayaa ku dhawaaqday dib u furitaanka taariikhda Janaayo 27, 2022.
Baxsashada bogsigu waa kaliya dhagax tuurid leh heshiisyo badan iyo waajibaadka booqashada si aad ugu raaxaysato.
Baha Mar Ayaa Soo Dhaweeyay Makhaayada Ugu Cusub Marcus Samuelsson - Lix jeer James Beard cunto-kariye ku guuleystay Marcus Samuelsson ayaa markiisii ​​ugu horreysay ka soo muuqan doona makhaayadiisa cusub. Baha Mar Kalluunka + Guriga loo yaqaan 'Chop House', ee Baha Mar bishii Luulyo 12, oo ka kooban waxyaabaha ugu caansan ee maxalliga ah iyo cunnada badda ee Bahamian, oo lagu dhammaystiray qolka cuntada oo firfircoon iyo baarka is biirsaday ee saqafka sare.
Dhacdadii Ugu Horeysay Abid ee Grand Bahama - Jasiiradda Grand Bahama ayaa soo bandhigaysa Ku quus Grand Grand, kulan shan maalmood ah oo ay isugu yimaadeen Safiirada Bahamas Dive, oo labaduba ah kuwa furan oo shahaado kahelaya noocyo kala duwan iyo hawl wadeenada maxalliga ah, laga bilaabo Julaay 19-23, 2021. Goobaha quusidda ee xiisaha leh waxaa ka mid ah burburka, shixnadaha iyo la kulanka kalluumeysiga reef Caribbean.
Sandals Royal Bahamian oo Kordhiyay Mashruuca Dayactirka - Hoteel abaalmarin ku guuleystay, dalxiis iyo jasiirad gaar loo leeyahay oo ku taal Nassau, Sandals Royal Bahamian, ayaa ku dhawaaqay taariikhda dib loo furayo Janaayo 27, 2022. Astaamaha dayactirka malaayiin-doolar ee socda Qumbaha Qumbaha, Meel ballaadhan oo lagu nasto oo ku fidisa jawiga xeebta bartamaha dalxiiska.
Graycliff Kulaylinta - Helitaanka laba abaalmarin oo qaali ah oo loogu talagalay adeeg gaar ah, Graycliff Hotel ayaa lagu sharfay 33-kard sanadka isku xigta leh Abaalmarin Weyn in Khamriga Daaweeyaha Abaalmarinta Makhaayada ee 2021 waxayna noqotay ganacsigii ugu horreeyay ee Bahamas ee la siiyo Shahaadada Hubinta Caafimaadka ee Safarrada ee "Dalxiiska Caafimaadka ee Caafimaadka leh" oo ay bixiso Hay'adda Caafimaadka Dadweynaha ee Caribbean.
Shirkadda diyaaradaha ee Southwest Airlines ayaa ku dhawaaqday duulimaadyo buugaag ah oo ay qaadaneyso Nassau - Southwest Airlines waxay xaqiijisay soo noqoshada duulimaadyadeedii maalinlaha ahaa ee Nassau oo ka yimid Madaarka Caalamiga ah ee Fort Lauderdale-Hollywood iyo adeegga usbuuca ee Baltimore / Washington International Thurgood Marshall Airport laga bilaabo Oktoobar 7 iyo 9, siday u kala horreeyaan.
Socdaalka Royal Caribbean ee Xeebaha Hoyga ee Bahamas - Bishii hore, Qulqulatooyinka Badaha waxay dhameystirtay xafladdii ugu horreysay ee dejinta guriga ee Jasiiradda Grand Bahama. Hadda oo laga bixinayo nasasho toddobo-habeen ah oo ka socota Nassau, waayo-aragnimadu waxay leedahay laba maalmood oo gadaal-gadaal ah oo farxad leh Maalinta Wanaagsan ee CocoCay iyo maalin buuxda oo ah furitaanka xeebta-ciid-cad ee Grand Bahama Sabti kasta xagaaga oo dhan.
Maraakiibta MSC ayaa dib u bilaabi doonta doonida US - MSC Cruises waxay ku dhawaaqday dib u bilaabideeda markabkii The Bahamas ee saarnaa MSC Divina laga bilaabo Sebtember 16, 2021. Markabku wuxuu kuxiran doonaa jasiiraddiisa khaaska ah ee Bahamian, Ocean Cay MSC Marine Reserve. jaale hadda waa la heli karaa.
HORUMARKA IYO BIXINTA
Liiska dhameystiran ee heshiisyada iyo xirmooyinka Bahamas, booqo www.bahamas.com/deals-packages.
Guddiga Dhiirrigelinta Jasiiradaha Bahama Out $ 250 Bixinta Deynta Hawada - Safrayaasha Mareykanka iyo Kanadiyaanka waxay ballansan karaan xirmo fasax ah oo afar habeen ah ama ka dheer mid ka mid ah hoteelada ka qeyb galaya Bahama Out Promotion Board oo ka qeybgalaya. $ 250 amaahda hawada. Daaqadda sii qabashada: hadda - Julaay 31, 2021.
Xuska Maalinta Madaxbanaanida Bahamian oo leh DJ Kid Fresh –Dabaal deg Maalinta Madaxbanaanida Bahamian mid ka mid ah kuwa ugu waxqabadka badan ee Koonfurta Florida, DJ Kid Fresh, Julaay 9-11, 2021. Baakadaha waxay ka bilaabmaan $ 478 qofkiiba oo ay ku jiraan gaadiidka safarka, Hilton Hotel joogitaankiisa, marin u helka munaasabadaha Hilton Hotel iyo marin u helka Goobaha Dalxiiska Xeebta Bimini.
Shaqeynta Miisaaniyadda Miisaaniyadda –Haddii aad raadineyso guri ka baxsan gurigaaga shaqadaada xigta ee The Bahamas, ha u sii jeedin! Bell Channel Inn waxay bixisaa qiimayaal bille iyo seddex bilood ah safarka hadda illaa Disember 31, 2021.
Xirmada Joogitaanka Dheeraadka ah ee Jannada - Ku sii xir xirmo joogitaan oo dheeri ah Dalxiis Xeebeedka Paradise Cove oo aad ka hesho 40% qiimaha maalinlaha ah. Daaqadda ballansashada ayaa hadda socota illaa Diseembar 31, 2021.
Aroos qaali ah oo labo ah Exumas - Ka fogow culeyska qorsheynta arooska sannadkan; ha u oggolaadaan Embrace Resort inay maareeyaan maalintaada weyn oo ay martigeliyaan a xaflad fudud oo dhow kuwa kale ee muhiimka ah iyo inyar oo aad jeceshahay. Siciraduhu waxay ka bilaabmayaan $ 2,399 oo lagu daro arooska arooska, wasiirka ama caddaaladda nabadda iyo sawir qaadista albumkaaga arooska.
Bahamas oo leh in ka badan 700 jasiiradood iyo 16 goobood oo jasiirado u gaar ah, Bahamas waxay u jirtaa meel 50 mayl u jirta xeebta Florida, iyadoo siisa fududaansho baxsi oo ka dhoofta dadka safarka ah meel ka baxsan maalin kasta. Jasiiradaha The Bahamas waxay leeyihiin kalluumeysi heer caalami ah, quusid, doonni, shimbiro, iyo waxqabadyo ku saleysan dabeecadda, kumanaan mayl oo ah biyaha ugu caansan adduunka iyo xeebo aan hagaagsaneyn oo sugaya qoysaska, lammaanaha iyo dalxiisayaasha. Baadh dhammaan jasiiradaha waa inay ku bixiyaan www.bahamas.com ama Facebook, YouTube or Instagram si aad u aragto sababta ay uga Fiican tahay Bahamas-ka.